အတိုးအလျှော့မရှိရင် အလုပ်မဖြစ်တော့ပါ | Shan Herald Agency for News [Burmese]
Posted By: SHANon: February 28, 2017 In: အယ်ဒီတာအာဘော်
တိုးတက်မှု လို့ပြောရင် ပထမ ၃ လ၊ ဒုတိယ ၃ လ၊ ပထမ ၆ လ ဒုတိယ ၆ လ၊ ပထမ တနှစ်၊ ဒုတိယ တနှစ် အတွင်း လုပ်ဆောင်ချက်တွေရဲ့ လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုတွေကို တိုင်းထွာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ့အတွက် လက်ရှိ အာဏာရ အစိုးရ ရဲ့ နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု တွေရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ဒီကာလ လေးတွေနဲ့ တိုင်းထွာကြည့်မယ် ဆိုရင် …..
နိုင်ငံတော်အတိုင်အပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခေါင်းဆောင်တဲ့လက်ရှိ အာဏာရ NLD အစိုးရ ကနေ ဦးဆောင်ပြီး ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံ ပထမ အကြိမ် လုပ်ဆောင်နိုင်တာတွေဟာ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်မှု လို့ပြောလို့ရ မလား။ ပင်လုံ ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ပြန်လည်အသုံးပြုလာတာ တိုင်းရင်းသားတွေ ကျေနပ်ပုံတော့ရပါတယ်။ အမှန်တော့ ပြီးဆုံးသွားတဲ့ ပထမ အကြိမ်ဟာ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ ဦးဆောင် လာတဲ့ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကြီး ရဲ့ အဆက်ပါဘဲ။ ဒါ့ကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရှိမရှိ မကြာမီထပ်မံကျင်းပမယ့် ဒုတိယ အကြိမ် က ညီလာခံ က အဆုံးအဖြတ်ပေးလိမ့်မယ်လို့ ပြောရ ပါမယ်။
လာမယ့်လ အတွင်းမှာ ကျင်းပမယ့် ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံ ဒုတိယ အကြိမ်ခံမှာ တက်ရောက်လာ တဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက တနိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ် NCA လက်မှတ် ထပ်မံရေးထိုးတဲ့အဖွဲ့တွေ ပိုမိုပါဝင်လာမယ်ဆိုရင် ဒေါ်စုအစိုးရအတွက် မျက်နှာပန်းလှ စေပါတယ်။ မများလာတဲ့အပြင် ပါဝင်လာတဲ့ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေပိုလျှော့ နည်းသွားမလား …. ပိုနည်းသွားရင်တော့ ခေါင်းဆောင်တွေကြား ယုံကြည်မှု ပိုအားနည်းလာတယ်။ အမျိုးသားပြန်လည် ရင်ကြားစေ့ရေးအတွက် အားမကောင်းသေးဘူး …. နှစ်ဘက်လုံးက ပြည်ထောင်စုကြီးကို ရှေ့ရှုပြီး အလျှော့အတင်းပြုလုပ်မှ အလုပ်ဖြစ်တော့မယ်၊ ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့လမ်းစဉ်က အလုပ်မဖြစ်တော့ဘူး ဆိုတာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရ နှင့် တပ်မတော် တို့ဘက် က တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေဘက် အမှန်တကယ်ဘာလိုအပ်လဲ ဘာတွေပေးနိုင်မယ်၊ ဘာတွေမပေးနိုင်ဘူး၊ အပြတ်ပြောဖို့ လိုပါတယ်။ မင်းတို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့လာပြီးလက်မှတ်ထိုးကြပါလို့ပြောပြီး တဘက်ကလဲ စစ်ရေးပြင် ဆင်လှုပ်ရှားနေတာ၊ စစ်ရေးခြိမ်းခြောက်မှုပြုနေတာ၊ တပ်မတော်ကပေးတဲ့ မူ ၆ ရပ်ကိုဘဲ အတင်းချပြ နေတာတွေဟာ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးလုပ်နေတဲ့ တပ်ဖွဲ့တွေကို တွဲခေါ်ရာမရောက်ပါဘူး။
ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၂ – ၂၄ ရက်နေ့ က ဝ ဌာနချုပ် ပန်ဆန်းမြို့မှာ ကျင်းပတဲ့ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ ထိပ်သီး ညီလာခံ တတိယ အကြိမ်အစည်းဝေးကို ကြည့်ရင် NCA လုပ်ငန်း အလုပ်မဖြစ်တော့ တဲ့အကြောင်း ၎င်းတို့က ရဲရဲဝင့်ဝင့် ထောက်ပြလာနေပါတယ်။ ဒါဟာ NCA ခရီး မပေါက်စေတာ၊ NCA ကို NLD က ဦးဆောင်လုပ်လာတာ အလုပ်မဖြစ်တာ စတာတွေ ပြသနေပါတယ်။
ဒီ့အတွက် UNFC တောင်းဆိုထားတဲ့ ၈ ချက်ကို နိုင်ငံတော်အစိုးရက လိုက်လျောရင် UNFC အဖွဲ့ဝင် တွေ NCA လက်မှတ်ထိုးလာမယ်။ NCA လက်မှတ်ထိုးတဲ့ အဖွဲ့တွေ ၈ ဖွဲ့ကနေ တဆင့် ပိုမိုများပြား လာမယ်။
ဒီ့အတွက် မတ်ခ်ျလဆန်းပိုင်းမှာ နိုင်ငံတော် အတိုင်အပင်ခံ ဒေါ်ဆောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများဖက်ဒရယ်ကောင်စီ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းများ နှင့်တွေ့ရင် ဒေါ်ဆောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့ ‘မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ လက်မှတ်လာထိုးကြပါ’ လို့ပြောနေမယ့်အစား ‘သူတို့ဘာလို့ ငါ့ကိုမယုံကြည်တာလဲ ယုံကြည်အောင်ငါဘာလုပ်ပြရမှာလဲ၊ သူတို့ဘက်ကကော အလျှော့အတင်းလေး ဘာလျှော့ပေးနိုင်မှာလဲ၊ ငါ့ဘက်ကကောဘာတွေ လျှော့ပြီး စဉ်းစားပေးမလဲ’ ဆိုတာ စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
နိုင်ငံတော်အတိုင်အပင်ခံ၊ တပ်မတော် အပါအဝင် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ အလျှော့အတင်း လေးများပြုလုပ်ပြီး နိုင်ငံတော်ကောင်းစားရေး၊ တိုင်းသူပြည်သားကောင်းစားရေးအတွက် ထိုက်တန်တဲ့ ပြည်သူ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေ။